Fiiri sida booqashooyinka tafaariiqda, raashinka, goobaha shaqada ay u socdaan Warbixinnada Dhaqdhaqaaqa Google | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Fiiri sida booqashooyinka tafaariiqda, dukaamada, goobaha shaqada ay u socdaan Warbixinnada Dhaqdhaqaaqa Google
Fiiri sida booqashooyinka tafaariiqda, dukaamada, goobaha shaqada ay u socdaan Warbixinnada Dhaqdhaqaaqa Google
Google's COVID-19 Warbixinnada Dhaqdhaqaaqa Bulshada ayaa muujinaya sida booqashooyinka iyo dhererka joogitaanka meelo kala duwan ay isu beddeleen marka la barbar dhigo xilliga aasaasiga ah ee ka hor masiibada.
Warbixinnada, kuwaas oo si joogto ah loo daabacay, waxay muujinayaan isbeddellada dhaqdhaqaaqa ee wakhtiga marka la eego juquraafiga (oo ay ku jiraan waddanka, gobolka iyo degmada) muddo lix toddobaad ah, iyada oo xogtii u dambaysay ay ka dhigan tahay 2-3 maalmood ka hor (caddadadka waqti ay ku qaadato in la soo saaro warbixinnada).
Dhaqdhaqaaqa ayaa isbedelaya wakhtiga California. Garaafku wuxuu ka muuqdaa bogga Google News 'coronavirus portal; xogta waxaa laga soo xigtay Google's COVID-19 Warbixinta Dhaqdhaqaaqa Bulshada.
Qaybaha meelaynta Warbixinada Dhaqdhaqaaqa Bulshada ayaa soo bandhigaya isbeddelada qaybaha soo socda:
Tafaariiqda & madadaalada
Raashinka & farmashiyaha.
Beeraha nasashada (waxaa loola jeedaa jardiinooyinka qaranka ee rasmiga ah, maaha bannaanka guud ee laga helo meelaha miyiga ah).
Qaybuhu waxay isu geeyaan meelo leh astaamo la mid ah ujeedada hagista kala-fogaanshaha bulshada. Tusaale ahaan, dukaamada cuntada iyo farmashiyaha waa la isku daray sababtoo ah waxay u muuqdaan inay yihiin safarro lama huraan ah.
Qayb kastaa waxa ku jiri kara noocyo badan oo meelo ah Google-kuna waxa uu daabacaa isbeddellada qaybaha sare sababtoo ah waxay faa'iido u leeyihiin dadaalka jahawareerka bulshada iyo helitaanka adeegyada muhiimka ah.
Waxa sal-dhiggu tilmaamayo. Saldhigga waxaa loola jeedaa qiimaha maalinlaha dhexe ee u dhexeeya Janaayo 3 iyo Febraayo 6, 2020. Asal ahaan, waxay ka dhigan tahay "caadi" qiimaha maalintaas gaarka ah ee toddobaadka. Sidaa darteed, gundhiggu dhab ahaantii waa todoba qiyam oo kala duwan (hal maalin kasta oo toddobaadka ah).
Maalmaha gundhigga ahi weligood isma beddelaan sidoo kalena kuma xisaabtamaan xilliyada.
Google waxa ay ku talinaysaa in isticmaalayaashu ay u qiimeeyaan gobolkooda ka hor inta aanay falanqaynin xogta iyaga oo maskaxda ku haya su'aalaha soo socda:
Ma jiraan wax la taaban karo oo ka dhacay [gobolkaaga] intii u dhaxaysay Janaayo 3 iyo Febraayo 6, 2020?
Sidee bay booqdeyaasha baarkinku isu beddelaan Jannaayo ilaa hadda?
Intee in le'eg ayaad u malaynaysaa in dadku ku qaadan doonaan meelaha la dego?
Sidee bay noocyada shaqadu u saamayn karaan isbeddelka dhaqdhaqaaqa maalmaha shaqada ama maalmaha fasaxa?
Intee in le'eg ayaa gobolkaagu matalaa?
Tixgelinta sare waxay kaa caawin kartaa inaad si sax ah u fasirto xogta. Tusaale ahaan, shaxda hoose waxay muujinaysaa in booqashooyinka jardiinooyinka ay kor u kaceen 46% marka loo eego gundhigga; si kastaba ha ahaatee, Janaayo gudaha Degmada Suffolk, Massachusetts, waxay u egtahay mid qabow, taasoo laga yaabo inay niyad jabiso booqdayaal badan.
Nambarka ciwaanka (oo ku wareegsan casaanka sare) wuxuu ka tarjumayaa isbeddelka boqolkiiba ee taariikhda warbixinta, kaas oo ka muuqda xagga sare ee warbixinta.
Waxa aan muujinayn. Warbixinadu waxay muujinayaan isbeddelka qaraabada ah, ee ma aha booqdayaasha dhammaystiran ama muddada joogida. Sida kor ku xusan, isbeddelladu waxay ku xiran yihiin xilliga asaasiga ah mana muujiyaan isbeddellada sannadlaha ah.
Saldhigyada waxaa loogu talagalay qaybtooda gaarka ah, oo ay tahay in maskaxda lagu hayo marka la barbardhigo gobollada oo dhan. Nusqaamaha khadadka isbeddellada ayaa la muujiyaa marka Google uusan haysan xog ku filan oo uu si kalsooni leh oo qarsoodi ah u qiyaaso isbeddelka salka.
Sida xogta loo ururiyo. Aragtida isbeddelka waxa lagu abuuray urursan, xog aan la sheegin oo laga soo qaatay isticmaalayaasha kuwaas oo doortay Goobta Taariikhda ee akoonadooda Google (kaas oo si caadi ah u naafo ah). "Sida muunadaha oo dhan, tani waxa laga yaabaa ama ma matali karto hab-dhaqanka saxda ah ee dad weynaha," Google ayaa ku leh qaybta "ku saabsan xogtan" ee warbixin kasta.
Apple sidoo kale waxay heshay isbeddellada dhaqdhaqaaqa. Apple sidoo kale waxay isticmaashaa xogta aan la magacaabin si ay u soo saarto Warbixinada Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqeeda. Si kastaba ha ahaatee, jaantusyada Apple waxay muujinayaan wadista baabuurta, socodka iyo socodka gaadiidka, taas oo ka soo horjeeda in lagu jebiyo qaybo kala duwan sida Google u sameeyo.
Apple's Mobility Trends warbixinta New York.
Sababta aan u danayno. Xogta dhaqdhaqaaqa ayaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay ganacsiyada maxalliga ah si ay u qiyaasaan sida macaamiisha suurtagalka ah ee aaggoodu uga jawaabayaan masiibada socota iyo siyaasadaha loogu talagalay la dagaallanka. Warbixinta Dhaqdhaqaaqa Bulshada ee Maraykanka oo dhan waxay sidoo kale siisaa ganacsiyada sawir muuqaal ah oo ku saabsan sida dadku u guurayaan iyo wax uga qabashada waddanka oo dhan.
Apple run ma ka helaysaa raadinta iyo inay ku qaadato Google?
Tabaha Chrome aad u badan ayaa furan? Ku xaji browserka fowdada leh kooxaha tab.